Kọmpụta Okwu - Ntanetị Okwu Ntanetị - Ngwunye Okwu
Homelọ (dị ugbu a)
Ngukota okwu bu ndi amara ego nke ede ederede. Ọtụtụ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwere ụfọdụ mmachi ogologo, yabụ mkpụrụ okwu 1,000 ma ọ bụ 80,000. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe nkwụghachi site na paragraf ma ọ bụ ibe, ihe kachasịkarị bụ ịtụle ụdị mgbochi a na okwu ma ọ bụ ihe odide. Ọ dị mkpa ị na-agaghị akwụ ụgwọ ya. E nwedịrị ndị na - ede akwụkwọ ọgụgụ a kapịrị ọnụ site na ọnụ ọgụgụ okwu. Ebumnuche okwu nwere ogologo akụkọ mere eme. Ma ebumnuche mbido nke ọnụ ọgụgụ ndị a abụrụla iji weepụta ụdị okwu dị ka nke obere, ihe a na-ahụkarị, nke bara uru, ma ọ bụ nke dị mkpa nwere ebumnuche kacha elu maka iwepụta akwụkwọ ọkọwa okwu maka nkuzi na mmụta nke stenography, mkpoputa, ma ọ bụ gụọ ihe kachasị mfe. na ike rụọ ọrụ nke ọma.
Gịnị bụ Wordcounter?
Wordcounter bu ihe eji eme ka aguta oru, onu okwu, ahịrịokwu, paragraf, na ibe ya ozugbo, ya na grama na asambodo. N'ime uru ya bụ nyocha nke njupụta nke okwu, ebe ị ga - ahụ ihe okwu ị na - ekwu ugboro ugboro na ederede (iji mee SEO ọma, dịka ọmụmaatụ) na, ọkachasị, oge nkwụsị iji chịkwaa ogologo oge ọ ga - adị. Ọ dịkwa ike ịgwa gị ugboro ole ikwugharị okwu ederede gị, yana arụpụta okwu abụọ ma ọ bụ atọ na-ewukarị. Canchọta usoro dị na nnukwu ide ederede nwere ike isi aka ịme ya, mana kọmpụta nwere ike inye aka. Onye na-ahụ maka Okwu na-enyere gị aka ịmalite ịtụle ederede ederede mana na-egosi gị okwu na ahịrịokwu ndị ị na-ejikarị.
Ihe nchoputa ihe ntanetị nke oge a na-akwado iguta okwu, na otutu ngwa di iche iche di na ntaneti, ufodu ndi edeghari ederede nwere ihe omuma nke obodo iji guta okwu. Enwere ike inwe ntakịrị ntakịrị mkpụrụokwu bara uru na nsonaazụ ọnụ nke mkpụrụedemede dịgasị iche iche. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị iwu ma ọ bụ usoro na-akọwapụta ihe ga-eji ya mee ihe maka ọnụ okwu, ngwaọrụ dị iche iche na-agụta atụmatụ ha. Nkọwapụta a na-ahụkarị bụ "akwụkwọ ozi gbara okirikiri, nke na-egosi ụfọdụ ihe", mana mmemme dị iche iche gụnyere ihe dị iche iche pụtara na otu ihe a.
Ngụgụ okwu eji Microsoft Okwu
Otutu ndi mmadu na edeputa ederede ha na Microsoft Okwu, akuko a na-agu otutu okwu. Statistics Microsoft Microsoft na-echebara ihe niile dị n'etiti oghere abụọ okwu, ma ọ bụ ọnụọgụ ma ọ bụ akara. N’aka nke ozo, Okwu etinyeghi n’okwu ya iguta onu ogugu n’ime ederede ederede ma obu udi, nke puru ime mgbe ufodu tinye onu ogugu n’onu n’okwu gi.
Ngwá ọrụ okwu ọnụ
Ngwaọrụ doro anya maka ịgụta okwu ziri ezi karịa Microsoft Okwu. Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ nwere ike ikpebi n'ime gị ị gụọ ọnụọgụ ma ọ bụ tinye ederede site na ihe ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ ọgụgụ ahụ. Ngwa akacha ọnụ ọgụgụ mkpụrụokwu na-enwekarị ohere ịgụ mkpụrụ na isi okwu, ihe odide, ndetu, ihe odide ala ala peeji, ederede ederede, igbe ederede, nkọwa, ederede zoro ezo, ederede na agbakwunyere na njikọ akwụkwọ. Ọzọkwa, ha nwere ike ịnye ọnụ ọgụgụ okwu ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro faịlụ.
Ha na-ekwu na n'ihi ọdịiche ndị a ọnụ ọgụgụ okwu akụrụngwa na-arụpụta ọnụ ọgụgụ okwu ole ma ole karịa ọnụ ọgụgụ okwu na Microsoft Okwu.
Ngwa maka ịgụta okwu
Agbanyeghị na ha enweghị ọtụtụ ọrụ dị ka nsụgharị desktọpụ, enwerekwa ngwa ekwentị maka ịgụta okwu na odide. N'ihe banyere gam akporo, anyị nwere ike iji Okwu Counter, ngwa dị mfe nke na-agụ naanị okwu, mkpụrụedemede nwere oghere, mkpụrụ edemede na-enweghị oghere na nkebi ahịrịokwu.
Ngwa iPhone bụ nke kachasị mkpa, aha ya na-ahapụkwa obere ụlọ maka ejighị n'aka: Gosipụta okwu, agwa, ma ọ bụ paragraf ọnụ, na nke a bụ ihe ngwa ahụ na-eme, ma ọ bụ karịa.
Okwu na-enweghị atụ
Ihe omuma (enweghị oghere)
Ikpe kacha ogologo (okwu)
Shortest Sentence (okwu)
Avg. Ikpe (okwu)
Avg. Ikpe (chars)
Nkezi. ogologo okwu
Oge Na-ekwu Okwu
Oge Edere Aka
Ngwá Ọrụ okwu kọmputa n'ịntanetị (C) Wordcounteronline.net
Anyị na-eji kuki, naanị iji soro na nleta na weebụsaịtị anyị, anyị anaghị echekwa enweghị nkọwa onwe onye.